Galmudug Iyo Puntland Oo Ka Wada Hadal Ka Yeeshay Arrin Muhiim Ah | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka Galmudug Iyo Puntland Oo Ka Wada Hadal Ka Yeeshay Arrin Muhiim Ah
Galmudug Iyo Puntland Oo Ka Wada Hadal Ka Yeeshay Arrin Muhiim Ah
Kulankaan oo ahaa mid looga hadlayay sii xoojinta wada shaqeynta dhanka adeegyada caafimaadka ee ay u baahan yihiin bulshadu, isla markaana daba socday kulamo mudooyinkii u danbeyay u dhaxeeyay masuuliyiinta Wasaaradaha caafimaadka Puntland iyo Galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada Galkacyo.
Kulanka oo ay si wadjir ah u shir gudoominayeen Wasiiradda Caafimaadka Puntland iyo Galmudug ayaa waxaa ka qeyb galay howl wadeeno ka socday wasaaradaha caafimaadka, Agaasimayaasha labada isbitaal ee waaweeyn ee Gaalkacyo, waxaana kulanka intiisa badan layskula soo qaaday sidii la isaga kaashan lahaa daboolista adeegyada caafimaad ee ay bulshada u baahan yihiin.
Wasiirka Wasaarada Caafimaadka Galmudug Dr C/wali C/llaahi Jaamac oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa waxaa faah faahin ka bixiyay ujeedka kulanka oo tilmaamay in uu yahay mid labada wasaaradood ay uga gol leeyihiin in la sii xoojiyo wada shaqeynta dhanka adeegyada caafimaad ee ay bulshada u baahan yihiin
Sidoo kale kulanka ayuu sheegay inuu daba socdo kulamo madaxda labada Wasaaradood ay ku yeesheen magaalada garoowe iyo magaalooyin kale oo ka tirsan kuwa dowlad gobaleedka puntland.
Wasiirka Caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa isna dhankiisa xusay in lama huraan ay tahay in la xoojiyo qorshaha wada shaqeynta bahda caafimaadka Puntland iyo Galmudug oo mudooyinkii u danbeysay ay ka muuqanayeen iskaashi wanaagsan.
Ugu danbeyn labadda wasiir iyo mas’uuliyiinta ka socday qeybaha kala duwan ee Wasaaradahaasi ayaa si wadajir ah kormeer ballaaran ugu sameeyay qeybo ka mida isbitaalka weyn ee Gaalkacyo Galmudug iyo howlaha shaqo ee isbitaalku u bulshadu u hayo iyagoona warbixino la xariira xaaladaha bukaanada isbitaalka ku jira ka dhageysaty dhaqaatiirta iyo howladeenada caafimaadka.